I-america & apos; iiwotshi zeselfowuni ezona zinqabileyo kunokuba yinto ephambili ekusombululeni uguquko 'olubi' 5g
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-America kunye neapos; ezona ndawo zinqabileyo zeefowuni ezinokuba sisitshixo ekusombululeni uguquko 'olubi' lwe5G
I-America kunye neapos; ezona ndawo zinqabileyo zeefowuni ezinokuba sisitshixo ekusombululeni uguquko 'olubi' lwe5G
Nokuba uhamba ngenqwelomoya eFlorida Panhandle, okanye uthatha uhola wendlela ongaphazanyiswa waseMontana, akukho nto ingaphaya kwamaMelika ngaphandle ... kweefowuni zefowuni ezifihliweyo. Injalo, kwaye ilungile, imowudi ye-incognito epheleleyo yezixhobo ezihloniphekileyo ezihambisa iselfowuni yakho yinto, kwaye kukho neenkampani ezijike umsebenzi wokufihla ukuba ube lishishini ... kunye nefom yobugcisa.
Imbali yenqaba yeseli efihliweyo
Umzi-mveliso obizwa ngokuba 'yinqaba efihliweyo' kubonakala ngathi uqalile kwi-1992 xa inkampani yabiza ULarson ifihle inqaba yeselula njengomthi wepayini. IArizonans yaqala ukuzifihla izinto njengehlabathi lendalo kwakudala ngaphambi koko, kwaye usenokuba ukhe wayibona imisebenzi yabo yezandla njengamatye okwenziwa kumyezo wezilwanyana okanye ezimbini. Ukusukela ngoko, baphuhlise ezinye uyilo ezininzi onokuzibona apha ngezantsi, kwaye abanye abadlali bangene kwimarike.
Isizathu sokufuna ukufihla iinqaba zeeselfowuni zahlukile, kwaye zolule ukusuka kubuhle begalufa, ngokusebenzisa ukubuyela umva koluntu, ukuya kufihla iinqaba kwiipaki zesizwe njengenxalenye yendalo esingqongileyo.
Ubuhle bohlaziyo lwe5G
Ngokufika kwe5G, efuna ubungakanani obukhulu ngakumbi kunye nenani elininzi lezikhululo ezisisiseko, ukufihla amantshontsho amabi kwindawo yasezidolophini kunokuba lithuba leshishini.
Thatha imeko nge Ukubuyela umva kwabahlali ngokuchasene nezicwangciso zokukhutshwa kwe5G eWhitefish, eMont. IBhunga lesiXeko lalapho lafunda lisoyikeka ukuba umthetho weCCC we & apos; amaziko amancinci angenazingcingo 'angayalela ngokuchanekileyo ufakelo lwe5G ngaphandle kokuba izixeko zingenise ingqwalaselo kumhlaba wobugcisa ngexesha elifutshane.
Kutheni sixhalabile? Ngenxa yokuba & rsquo; zimbi
Ukusukela ngalo mzuzu umphathi angenisa isicelo sendawo ye5G edolophini, abahlali baneentsuku ezingama-60 zokuyicombulula xa kufikwa kwizakhiwo esele zikho ezinjengezithuba zezibane, kunye neentsuku ezingama-90 zolwakhiwo olutsha njengakwizakhiwo. Oko kufutshane kakhulu kwisaziso, kwaye ukuba amabhunga ayasilela ukuphakamisa nasiphi na isichaso, umthetho weCCC umisela, isicelo sokufaka kufuneka sinikezwe ngokuzenzekelayo.
Ngenxa yokuba kuya kubakho abathwali abaninzi, nganye inethiwekhi yayo ye-5G, umntu unokubona ukuba umtsalane wedolophu encinci yeendawo ezininzi unokutshatyalaliswa ngokukhawuleza. NgokweNational League of Cities, 'oku kungakhokelela ekubeni izihloko zeeseli ezincinci ezingabonakaliyo zibonakalise kwaye ziphazamise ubuhle bendawo. ' Igqwetha lesiXeko saseWhitefish u-Angela Jacobs uyavuma:
Kutheni sixhalabile? Kungenxa yokuba banobubi kwaye nathi sinenkxalabo malunga nokubanakho ekufuneka bengaboni kakuhle ikakhulu edolophini yethu ... Sifuna ukwenza oku malunga noku. Oku kuyeza, & rsquo; yinto nje yokuba nini.
Ngaphandle kokuthetha, i-FCC yenze ukuba ukuvuma kweziseko ze5G kwiziseko ezikhoyo kube lula ngesizathu - ukhuphiswano lwaseMelika kwityhala lehlabathi eliza kugubungela ilizwe labo ngomgangatho wokudityaniswa kohlobo olulandelayo ngokukhawuleza. Izixhobo zeseli ezincinci ziyinxalenye enkulu yale projekthi, njengoko izikhululo ezisisiseko se5G zinokufuna ukuba ziimitha ezingama-300 ukwahlula abemi ngengubo eyamkelekileyo.
Kungenxa yoko le nto umthetho weCCC uye wakhawulezisa ukulandelwa kwenkqubo encinci yokukhutshelwa kweeseli ngokuyalela iwindow emfutshane kakhulu yokuvunywa, kunye nokufaka imali kwiidolophu ezinokuhlawulisa ezi klasta ze5G kwiipali okanye izibane. Ngokwe-FCC, esi sigwebo sikhusela ngokuchasene 'Izithintelo zolawulo ezinokuthintela ngokungekho mthethweni ukuthunyelwa kweziseko eziyimfuneko ukuxhasa ezi nkonzo zintsha. '
Ngelixa iidolophu ezininzi kunye neebalo sele zifake isimangalo ngokuchasene nomthetho weCCC wokukhawulezisa ukuhlala e-US ngezixhobo ezincinci zeseli ngaphandle kwe-aesthetics okanye ezinye izinto eziqwalaselwayo, i-Whitefish, Mont. uvota kummiselo wokulawula uyilo lwabo. Ukuba abathwali bafuna ukubeka izitishi ezisisiseko kwiposi yesibane, kuya kufuneka bahambisane nezibane zangoku zokuhombisa, umzekelo.
Yiyo loo nto ababoneleli ngezixhobo ezingafakwanga ngaphandle kwamacingo banokubona ukuxhoma kwishishini lokufihla kude neefowuni zeselfowuni, nakwizibonelelo zeseli ezincinci zokugubungela i-5G ekufuneka idibene nendawo yedolophu. Banikwe oko bakufezileyo ngetreyini yefowuni efihliweyo ukuza kuthi ga ngoku, umsebenzi awubonakali ungenakoyiswa, njengoko ubona ngezantsi.
Iinqaba zabo zeselfowni ezifihliweyo zinendawo yazo kwiibhlog zokufota njengezinto ezinqabileyo ezifanelekileyo kwi-albhamu epheleleyo, njengeprojekthi ebizwa ngokuba 'I-Fauxliage -Izixhobo ezifihliweyo zeeseli zaseMelika eNtshona. '
Iphuhliswe ngu-Annette LeMay Burke ukusuka Indawo yokusebenzela yeLeMay , ngumfoti wezobugcisa kunye ne-apos; imbeko kwilizwe elinobuqili kunye nelimangalisayo laseMelika kunye neapos; zifihle iinqaba zeeselfowuni. Jonga uyilo olufakwe apha ngezantsi, kwaye usixelele ukuba yeyiphi oyithandayo- icactus, inyathi, umnqamlezo okanye umthi wesundu?
Umnyele we-galaxy s7 vs htc 10
I-64 gb vs 256 gb
Uphengululo lweMoto G5 Plus
I-Apple iPhone 5s vs iPhone 5c vs iPhone 5 ukuthelekisa okucacileyo: ukubona umohluko
Iverizon yakutshanje vs i-AT & T, T-Mobile kunye ne-Sprint LTE isantya kunye neemephu zokugubungela zibonisa i-T-Mobile kunye nenkqubela phambili ephambeneyo
Ividiyo esemthethweni ikubonisa indlela yokuthengisa i-Pokemon kwi-Pokemon Go
IXfinity Imfono ityhila ezona zintle ziLwesihlanu oMnyama kunye neCyber ​​Monday
Kutheni abantu bayithiyile iApple?
I-Asus ZenPad 8.0 ngoku ihlaziywa kwi-Android 7.0 Nougat